Older Post လုပ်လို့မရပါ။ - MYSTERY ZILLION
Older Post လုပ်လို့မရပါ။
July 2008 edited August 2008 in Blog
ကျွန်တော့် ဘလော့ လေး ကို
ဂျစ်ပစီလေးရယ် ချိတ်မကောင်းလိုက်တာ.. သွပ်သွပ်သွပ် ငိုနဲ့တိတ်တိတ်။ ဂျစ်ပစီလေးက အနော့ထက်စာရင် တော်ပါသေးတယ်ဂျာ။ အနော့မှာက ဘာမှမတတ်လို့ မေးစရာ blog, တောင်မရှိဘူး။
နဲနဲစိတ်ရှည်ရှည်လေးစောင့်ကြည့်ပါအုံးဂျာ။ နားလည်တဲ့သူတွေရှိမှာပါ။ လောလောဆယ် ငိုနေလို့လာအားပေးတာ။ အနော်ဆိုပိုတောင်ဆိုးသေး ။ ဘာမှကိုမသိတာ။:P စိတ်မပျက်နဲ့
စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ ...
ကျွန်တော် မနေ့ကတည်းက ဒီတော့ပစ်ကို ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ် ... ဘာမေးမှန်းမသိတာနဲ့ ...
ဘာမှ မဖြေပဲပြန်ထွက်သွားတာ ...
မေးတာကို နားမလည် ပေမယ့် ထင်တာကို ဖြေမယ်ဗျာ ...
မှားရင် ထပ်မေး ... ဖြေမယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်ကို ဘလော့စ် တွေရေးနေတဲ့ သူလို့တော့ မထင်နဲ့ ... :68:
သူများ အခက်အခဲဖြစ်နေရင် ဟိုရှာဖတ် ဒီရှာဖတ်လုပ်ပြီး ပြောပြောပြနေတာ ...
မေးချင်တာက ... ပိုစ့်တွေ တင်ထားတာများနေတယ် ... main page မှာ ပိုစ့်အများကြီးမပေါ်ချင်လို့
older post ဆိုပြီးလုပ်ချင်တယ် ထင်တယ် ...
အဲ့လိုဆိုရင် ... blog ကို login ၀င်
ပြီးရင် Settings ကိုနှိပ်
ပြီးရင် Formatting ကိုနှိပ်
အပေါ်ဆုံးမှာ Show ဆိုတာတွေလိမ့်မယ် ... သူ့ဘေးမှာ main page မှာ ပေါ်ချင်သလောက် ပိုစ့်
အရေအတွက်ကို ထည့် ..... ပြီးရင် Posts ကိုပဲရွေးပြီး ... Save Setting ကိုနှိပ်လိုက် ...
အနာနဲ့ ဆေးနဲ့ တခြားစီဖြစ်နေရင် လဲ Sorry ပါဗျာ ... :106:
အထူး အထူး ကျေးဇူး ပါပဲဗျား :103:
မရဘူး ကို 2323 ရေ
အရေအတွက်ကို ထည့် ..... ပြီးရင် Posts ကိုပဲရွေးပြီး ...
Save Setting ကိုနှိပ်လိုက် ..
ခုဖောင့်ကြီးထားတာကို မလုပ်လိုက်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ....
နှိပ်လိုက်လို့ ဒီလို စာသားပေါ်လာရင် ရပါပြီ ...
Settings Were Saved Successfully
အစ အဆုံးသေချာဖတ်ပြီး သေချာပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ ....
Template အသစ်ပြောင်းကြည့်ပါလား။ ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ :D:D
ကျွန်တော်အထင်အစ်ကို Edit html မှာတစ်ခုခုကိုသွားဖျက်မိတယ်လို့ထင်တယ်ဗျ။ ဒါမှမဟုတ် ကို aTxIvG4001 ပြောသလို Template အသစ်ပြောင်းကြည့်ရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
mz မရတုန်းက ကိုယ့် blog လေးကိုကယ်ကလိရင်နဲ့ ကို itmen http://itmen.myanmarbloggers.org
me: i want to make older post in my blog
Ko it men: u must use layout template at blogger setting
me: which template have layout templater?
Ko it men: u must choose customize design at blogspot setting